iPhone6Camera Tips and Tricks: ပုံထွက်ကောင်းအောင် iPhone 6/6S နဲ့ ရိုက်ကြမယ် – Digital Photography Myanmar
HomeMobile PhotographyiPhone6Camera Tips and Tricks: ပုံထွက်ကောင်းအောင် iPhone 6/6S နဲ့ ရိုက်ကြမယ်
Sony Xperia Z5 နဲ့ Nexus 6P စမတ်ဖုန်းတွေလောက် မီဂါ ပစ်ဇယ် မများပေမယ့် iPhone 6S နဲ့ 6S Plus တို့ဟာ စမတ်ဖုန်းနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးတဲ့လောကမှာ ထိပ်ဆုံးကနေ ဦးဆောင်နေသူတွေထဲ ပါဝင်နေပါတယ်။
ဂန္ထဝင်ဆန်တဲ့ မှန်သား၊ sapphire ဖုံးထားတဲ့ မှန်ဘီလူးမျက်နှာပြင် နဲ့ pixel တွေကို မြန်မြန်နဲ့ အသေးစိတ် focus ဖြတ်နိုင်ခြင်း စတာတွေ ပါတာတင်နဲ့တင် ကျွန်တော်တို့ သူ့ကို ကြိုက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ဒီထက်နည်းနည်းလေး ထပ်လေ့လာကြည့်လိုက်ရင် Apple စမတ်ဖုန်းတွေအတွက် အသုံးဝင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေထပ်တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။ ဆက်ပြီးတော့ လေ့လာကြည့်လိုက်ပါဦး။
ကျွန်တော်တို့ အိုင်ဖုန်းသုံးပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ကြတယ်ဆိုကြပါစို့၊ ပုံမှန်အားဖြင့် စောင်းနေတဲ့ပုံတွေ၊ ရေပြင်ညီ မဖြစ်တဲ့ပုံတွေ အလွယ်တကူ ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ တမင်တကာ စောင်းပြီး ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေက တခါတလေမှာ ကြည့်ကောင်းနိုင်ပေမယ့် တခါတလေမှာ ပုံကောင်းတွေကို လွဲချော်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သိထားရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
လမ်းညွှန်ချက် (၁)။ grid လိုင်းတွေ ဖော်လိုက်ပါ
grid လိုင်းတွေ ဖော်လိုက်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။ grid လိုင်းတွေဆိုတာ ကင်မရာ app ရဲ့ မျက်နှာပြင်မှာ ဓါတ်ပုံရိုက်ရလွယ်ကူအောင် အပေါ်အောက် ဘယ်ညာ ထောင့်ဖြတ်ဆွဲထားတဲ့ လိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲလို လိုင်းတွေ ဖွင့်ထားလိုက်ခြင်းဟာ ကင်မရာ app ရဲ့ မြင်ကွင်းအတွက် ရှုပ်ရှု့ပ်ထွေးထွေးဖြစ်နိုင်မယ့် အနေအထားက နေ သွေဖယ်သွားအောင် ကူညီနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Grid လိုင်းတွေကိုဖွင့်လိုက်ပါ၊ ရေပြင်ညီအနေအထားရအောင်ယူပြီး ရိုက်လိုက်တာနဲ့ ပိုပြီး ကြည့်ကောင်းတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ခင်ဗျားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေဒီလို ရေပြင်ညီ အနေအထားရအောင် grid လိုင်းတွေသုံးပြီး ကြည့်နေချိန်မှာ တကယ့်ကို အသုံးဝင်တဲ့ အခြားအရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဓါတ်ပုံပညာမှာ grid လိုင်းတွေကို rule of third ရအောင် သုံးကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Rule of third ဆိုတာ ဓါတ်ပုံရဲ့ composition ဖွဲ့စည်းမှုကို ပိုကောင်းအောင်လို့ ကူညီပေးတဲ့ သီအိုရီဖြစ်ပြီး သင်ရဲ့ ဓါတ်ပုံအတွင်းမှာ ရှိတဲ့ object ကို ဓါတ်ပုံရဲ့ အလယ်တည့်တည့်မှာ ထားတာထက် ဘေးဘက်ကို ရွှေ့ထားလိုက်တာပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆတစ်ခုပါ။ ကဲ object ကို ဓါတ်ပုံမြင်ကွင်းရဲ့ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကို ပို့လိုက်ပါ။ တကယ်လို့များ ဒုတိယ object သာမပါဘူးဆိုရင် သင့်ရဲ့ ဓါတ်ပုံဟာ ပုံကောင်းတစ်ပုံဖြစ်သွားပါပြီ။
လမ်းညွှန်ချက် (၂)။ Auto HDR ကို ဖွင့်ထားပါ
သင့်ရဲ့ အိုင်ဖုန်းဓါတ်ပုံတွေမှာ ပိုပြီးကောင်းတဲ့ ပုံရိပ်ရဖို့အတွက် တခြား အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်းတစ်ခုက ကင်မရာ app ရဲ့ အပေါ်ဖက်မှာပါတဲ့ HDR ဆိုတဲ့ mode ကိုကစားကြည့်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ HDR ဆိုတာ High Dynamic Range ကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပြီး အလင်းဆုံး၊ အလယ်အလတ်နဲ့ အမှောင်ဆုံး exposure တွေကို စုစည်းထားပြီး အကောင်းဆုံး ပုံရိပ်ကို ပြန်လည် ဖော်ပြပေးတဲ့ နည်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
သို့ပေမယ့် dynamic range ဆိုတာဘာတွေလဲ? ကင်မရာတွေရဲ့ sensor တွေမှာ ပုံရိပ်တွေကို အရမ်းကြီးလင်းမနေအောင် အရမ်းမှောင်မနေအောင် အလင်းဆုံးနဲ့ အမှောင်ဆုံး အပိုင်းတွေကို ချိန်ညှိပေးတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ပါဝင်ပါတယ်။ HDR ကတော့ အဲလိုမျိုး အလင်းအမှောင်တွေကို အဆုံးအစွန်ထိထားရိုက်ကူးပြီး လိုအပ်သလိုပြန်ချိန်ညှိပေးခြင်းဖြင့် auto mode နဲ့ ရိုက်ထားလို့ ပျောက်နေတဲ့ detail တွေကို ရရှိနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ နည်းစနစ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ iPhone6 မှာ iOS7.1 ကိုအဆင့်မြှင့်တုန်းက လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Auto HDR ဆိုတာပါရှိပါတယ်။ iPhone 5S နဲ့ အထက်ဖုန်းတွေမှာပါတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်လို့ပြောလို့ရပြီး မှန်ကန်တဲ့ HDR ကိုလုပ်ဆောင်ပေးတာကို တွေ့ရမှာပါ။ HDR လုပ်ဆောင်ချက်ကို တစ်ချိန်လုံး ဖွင့်ထားပြီး ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေဟာ သဘာဝမကျတဲ့ ပုံတွေဖြစ်ကုန်မှာပါ။ Auto HDR စနစ်ကို ဖွင့်ထားရင်တော့ လိုအပ်တဲ့အချိန်ရောက်မှသာ HDR နဲ့ရိုက်ကူးမှာဖြစ်ပြီး သင့်ကို တချိန်လုံး HDR နဲ့ရိုက်ကူးဖို့ အားပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။
လမ်းညွှန်ချက် (၃) ရှောင်ကျဉ်ရန် အချက်များ
iPhone6S နဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုရင် အချက်နှစ်ချက်ကို အမြဲတမ်းရှောင်ကျဉ်ရပါမယ်။ အဲဒါကတော့ zoom နဲ့ flash ဖြစ်ပါတယ်။
iPhone6S မှာ ဒစ်ဂျစ်တယ် zoom စနစ်ကို သုံးထားပါတယ်။ သူ့အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ ဓါတ်ပုံကို ဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ ဖြတ်ထုတ်ထားတဲ့ အပိုင်းကို ချဲ့လိုက်တယ်။ ချဲ့လိုက်လို့ ပေါ်လာတဲ့ noise တွေကို software နဲ့ လျှော့ချလိုက်တယ်။ အဲဒီ ရလဒ်ကတော့ ပုံတွေရဲ့ ရုပ်ထွက်က ဝါးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ iPhone မှာ သူ့ရဲ့ digital zoom အတွက် လုံလောက်တဲ့ resolution ဒါမှမဟုတ် detail မရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းနည်းလေး zoom ချဲ့လိုက်တာနဲ့တင် အဲဒီဓါတ်ပုံဟာ zoom ရဲ့ ချဲ့ထားတဲ့ပုံမှန်းကို သင်ပြောနိုင်ပါတယ်။
Zoom ဆွဲပြီးရိုက်မယ့်အစား ကျွန်တော်တို့တွေ ပုံမှန်အတိုင်း အဝေးကနေ ရိုက်၊ ပြီးမှာ ဖြတ်ထုတ်လိုက်တာဟာ ပိုပြီးကောင်းတယ်လို့ပဲ ပြောပရစေ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ခင်ဗျားမှာ edit လုပ်ဖို့ ဆိုက်အပြည့်ရှိတဲ့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံ ရှိထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် subject ရဲ့ အနားကို တိုးပြီးရိုက်ကြည့်ပါ၊ သင်က နေရာရွေ့ပြီးရိုက်ကူးနေလို့ တစ်ခါတစ်လေမှာ ပိုကောင်းတဲ့ ပုံရိပ်မြင်ကွင်းတွေ ရနိုင်ပါသေးတယ်၊ subject အနား ပိုပြီးတိုးပြီးရိုက်ကြည့်ပါ တမူထူးခြားတဲ့ မြင်ကွင်းတွေပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်၊ ညဖက်ရိုက်တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ပျက်စီးစေတဲ့ အရာက flash ပါပဲ။ Flash နဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Detail တွေနည်းနေတာ ၊ over-exposed ဖြစ်နေတာ၊ မျက်နှာကြီး ဖြူလွန်းပြီး သရဲလိုဖြစ်နေတာတွေဟာ flash ဖွင့်ပြီး ရိုက်ထားတဲ့ လက္ခဏာတွေပါ။
iPhone6S မှာ TrueTone Duel LED flash စနစ်ပါတာတောင်မှ ပုံမှန် အခြေအနေနဲ့ ပုံကောင်းတွေရဖို့ တော်တော်လေး လိုသေးပါတယ်။ အဲဒီအစား သဘာဝက ရတဲ့ ဘယ်အလင်းရောင်ဖြစ်ဖြစ်ကို အသုံးပြုပြီး ရိုက်ကြည့်ပါ၊ တည်းဖြတ်တဲ့ app တွေကို သုံးကြည့်ပါ။ app တွေဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာ နောက်ပိုင်း လမ်းညွှန်ချက် (၅) မှာ ထပ်မံပြီးဖော်ပြထားမှာပါ။
လမ်းညွှန်ချက် (၄)။ Live Photos လုပ်ဆောင်ချက်ကို သုံးရင် သတိထားပါ
Live Photos ဆိုတာ iPhone6S နဲ့ 6S Plus မှာပါတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် အသစ်တစ်ခုပါ၊ စက္ကန့်အနည်းငယ်ပဲကြာတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တိုလေးတစ်ခုကို ဓါတ်ပုံရဲ့ အစနဲ့ အဆုံးမှာ ထည့်ပေးထားတာပါ။ သူ့ရဲ နဂိုရည်ရွယ်ချက်တော့ သေချာမသိပါဘူး ဒါပေမယ့် အသုံးပြုတတ်မယ်ဆိုရင် အကောင်းစား ရလဒ်တွေရနိုင်ပါတယ်။
Live Photos လုပ်ဆောင်ချက်က ပုံမှန်ဆို တချိန်လုံး ပွင့်နေတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ က ဖုန်းမျက်မှာပြင်အပေါ်ပိုင်းက icon အဝိုင်းလေးကို နှိပ်ပြီး အဲဒါကို ပိတ်ထားစေချင်ပါတယ်။ နောက်မှ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အချိန် သုံးချင်တဲ့အချိန်ကျမှ ပြန်ဖွင့်စေချင်ပါတယ်။ သွားနေတဲ့ မော်တော်ယာဉ်တွေကို ရိုက်ရင် တော်တော်ကြည့်ကောင်းပေမယ့် ညစာစားပွဲလိုမျိုးဆိုရင် သိပ်တော့အဆင်မပြေပါဘူး။
သတိထားဖို့ အရေးကြီးတဲ့အချက်က Live Photos လုပ်ဆောင်ချက် သုံးရင် ပုံမှန်ဓါတ်ပုံ သိုလှောင်တဲ့ ပမာဏ နှစ်ဆ လောက်ကို ဖုန်းမှာ သုံးပစ်ပါလိမ့်မယ်။ iPhone ၁၆ ဂစ်လောက်ကိုင်ထားတယ်ဆိုရင် သတိထားရမယ့်အချက်ပါ။
လမ်းညွှန်ချက်(၅)။ App များနဲ့ တည်းဖြတ်ပြင်ဆင်ခြင်း
ကျွန်တော်တို့ iPhone နဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ရင် အကြိမ်တော်တော်များများက ဖုန်းမှာ နဂိုပါတဲ့ camera app နဲ့ပဲ ရိုက်ဖြစ်တာပါ။ ဘာလို့လဲ? လွယ်ကူတယ် သုံးရတာမြန်တယ်၊ ဖုန်း စခရင် လော့ချထားတာတောင်မှ ကင်မရာကို ဖွင့်လို့ရလို့ပါဘဲ။
ရှားရှားပါးပါးအခြေအနေတစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့ တကယ့်ကို layout လိုတဲ့အချိန်မှာ ProCam ကို သုံးကြပါတယ်။ ပိုပြီး လုပ်ဆောင်ချက်တွေများတယ် ပိုပြီး တည်းဖြတ်လို့ရတယ် စတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ ဖုန်းရဲ့ သာမန် ကင်မရာထက် ပိုပြီးကောင်းမွန်ပါတယ်။ ProCam နဲ့ ဓါတ်ပုံတွေရဲ့ အရွယ်အစား၊ ပုံစံအမျိုးအမျိုးပြောင်းတာ၊ ညဖက်ရိုက်တာ၊ face detection လုပ်တာ shake မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာတွေ စတာတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ကောင်းတယ်ဆိုတာထက် ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကတော့ exposure ကို ခွဲနိုင်သလို focus ကိုလဲကြိုက်သလိုဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးပါ။
App တွေက သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပုံစံတွေနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ အသုံးပြုနိုင်သလို တခါတလေမှာလည်း ပုံမှန်အနေအထားနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ iOS အတွက်အကောင်းဆုံး ဓါတ်ပုံတွေတည်းဖြတ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုကြတဲ့ VCSO Cam လို့ခေါ်တဲ့ app ကို သွားကြည့်ရအောင်။
VSCO Cam app ကို ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကို Inport လုပ်လိုက်တာနဲ့ အဆင့်နည်းနည်းလောက် လုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဓါတ်ပုံအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး လုပ်ဆာင်ပုံ နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့များ လူပုံတစ်ပုံမှာ နည်းနည်းလေး ဝါးနေခဲ့ရင် Sharpen လုပ်ဆောင်ချက်ကိုအသုံးပြုပြီး ပိုကြည့်ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် အရမ်းကြီးမလုပ်ဖို့လဲ အရေးကြီးတယ်။ ဓါတ်ပုံရဲ့ အရောင် Temperature နည်းနည်းလေးတိုးလိုက်ရင် ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ ရှခင်းပုံတွေရနိုင်သလို၊ Exposure လုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုရင်လဲ အရမ်းလင်း သို့မဟုတ် အရမ်းမှောင်နေတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ကြည့်ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
VSCO မှာ share လုပ်ဆောင်ချက်အလန်းစားတွေရှိပါတယ်။ VSOC App ကိုမပိတ်ပဲနဲ့ Instagram ကဲ့သို့သော Social App တွေကို Share လို့မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် VSCO ရဲ့ Grid လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် sharing service မှာပဲ လှပတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို အတူဝေမျှနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်ဖေါ်ပြမယ့် App တစ်ခုက Darkroom ပါ။ Darkroom ကိုသုံးပြီးတော့ filter တွေကို နောက်ထပ်ပုံတစ်ပုံမသုံးပဲ နဂိုမူရင်းပုံပေါ်မှာ စိတ်ကြိုက် ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ အဲလိုလုပ်ဆောင်တဲ့အတွက် အချိန်ကုန်သက်သာတယ်၊ ဖုန်းထဲမှာ ဓါတ်ပုံရဲ့ သိုလှောင်ထားမယ့် ပမာဏကို လျော့ချနိုင်ပါမယ်။ သူ့မှာ လွယ်ကူတဲ့ slider ရှိတဲ့အတွက် မူရင်း ဓါတ်ပုံပေါ်မှာပဲ စိတ်ကြိုက် ဖန်တီး တည်းဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
Instagram ကတော့ တည်းဖြတ်တဲ့ App တွေထဲမှာ ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုတော့ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါမယ် ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့က သူ့ကို share ဖို့အတွက်လောက်ပဲ သုံးဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ တည်းဖြတ်ပြင်ဆင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ သိသိသာသာများလာပေမယ့် အများစုက VSCO နဲ့ Darkroom မှာပါတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ သိပ်မကွာပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လဲ သူ့ရဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ရလဒ် ပုံကတော့ နည်းနည်းလေး သဘာဝမကျဘူးလို့ ကျွန်တော်တို့မြင်မိပါတယ်။
လမ်းညွှန်ချက် (၆)။ လူမှုဆိုင်ရာ မီဒီယာများမှာ ဝေမျှခြင်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နောက်လာမယ့် လမ်းညွှန်ချက်မှာ Instagram က အင်တာနက်မှာ ဝေမျှဖို့အတွက် ထိပ်ဆုံးကနေဦးဆောင်နေတယ်ဆိုပေမယ့် ဝေမျှတဲ့နေရာမှာ အကောင်းဆုံးတော့ မဟုတ်လောက်သေးပါဘူး။
စတားဘတ်ခ်စ် ကော်ဖီခွက်တွေနဲ့ အရမ်း ပြင်ထားတဲ့ selfie ပုံတွေကို ဖယ်ထုတ်ကြည့်လိုက်ပါ၊ အင်စတာဂရမ်က ကျွန်တော်တို့ အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ ဓါတ်ပုံကောင်းတွေနဲ့ အတူကြီးထွားလာနေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အမြင်အရ ဆက်သွယ်ရအလွယ်ကူဆုံး လူမှုမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Instagram ကိုသင်လဲ ပါဝင် ပူးပေါင်း နိုင်(သင့်) ပါတယ်။ Twitter မှာ လဲ ဓါတ်ပုံတွေ ဝေမျှဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်ချက်ပါဝင်ပေမယ့် အဲဒါဟာ အရမ်းကို အေခြခံကျကျလောက်ပဲရှိတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်လေးပါပဲ။ Facebook မှာလဲတင်လို့ရပေမယ့် Instagram က တော့ ဓါတ်ပုံနဲ့ ပက်သက်လာရင် အားလုံးရဲ့ အထက်မှာပါ။
သင့်ရဲ့ အနုပညာဆန်တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ဝေမျှပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားပေးခြင်းဟာ သင့်ကို ပိုကောင်းတဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာတစ်ဦးဖြစ်လာပြီလို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လဲ ဒါက သင့်ကိုယ်ကို ကြီးမားတဲ့ အားပေးမှုဖြစ်ပြီး သင့်အတွက် ဓါတ်ပုံပညာမှာ လွှွမ်းမိုးနိုင်သူကို ရှာဖွေပေးမယ့် နည်းလမ်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်။
လမ်းညွှန်ချက် (၇)။ ညဖက်မှာ ဓါတ်ပုံကောင်းတွေ ရအောင် ရိုက်ကူးခြင်း
Flash သုံးပြီး iPhone6 နဲ့ ရိုက်ကူးတာဟာ မကောင်းဘူးလု့ိ ကျွန်တော်တို့ ဖော်ပြခဲ့ပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် နေဝင်သွားတဲ့အချိန်တွေမှာ Flash နဲ့ ရိုက်ကူးတာကို မဆိုလိုပါဘူး။
iOS8 မှာစတင်ပြီး ပါဝင်လာတဲ့ Exposure slider ကို အသုံးပြုပါ ဆိုတာ လမ်းညွှန်ချက်ကောင်းတစ်ခုပါ။ ခင်ဗျား တစ်ခုခုကို focus လုပ်လိုက်တာနဲ့ အလိုအလျှောက် ဖုန်းမျက်နှာပြင်မှာ ထွက်လာလို့ သင့်အနေနဲ့ လိုချင်တဲ့ Exposure ကို အတိုးအလျော့ လုပ်ပေးရုံပါပဲ။ Exposure တိုးလိုက်ရင် ကင်မရာရဲ့ Shutter ကို ကြာကြာဖွင့်ထားလို့ အလင်းပိုဝင်ပြီး လင်းလာတာမျိုး ဖြစ်လာမှာပါ။
လမ်းညွှန်ချက် (၈)။ သင့်ဓါတ်ပုံများအတွက် ပိုကောင်းလာစေမယ့် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ
iPhone တွေရဲ့ အရေအတွက်တိုးလာနေသလို့ သူ့ရဲ့ ဓါတ်ပုံဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေဟာလဲ တိုးလာပါတယ်။ အဲဒီအထဲက စိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံး ပစ္စည်းက Olloclip ဖြစ်ပါတယ်။ Olloclip က မှန်ဘီလူူးပါ၊ သင့်iPhone ရဲ့ မူလပါတဲ့ မှန်ဘီလူးအပေါ်မှာ ထပ်ပြီး တင်ဆင်လိုက်တာနဲ့ ပိုပြီး ဆန်းသစ်တည်ထွင်တဲ့ အမြင်နဲ့ ပုံတွေ အရည်အသွေးကောင်းပုံတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Olloclip ရဲ့ ကြီးထွားလာတဲ့ မှန်ဘီလူး စနစ်မှာ အဓိက ရည်ရွယ်ထားတာက iPhone အတွက်ဖြစ်ပြီး ရွေးချယ်စရာ တွေရှိပါတယ်။ ဥပမာ 4-in-1 lens boasts ဆိုကြပါစို၊ fisheye. wide-angle. macro 10x နဲ့ macro 15x တို့ပါဝင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ Olloclip ကို သေချာ သုံးကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ တကယ့်ကို ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်တာပဲဆိုတာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ တစ်ခုပါပဲ မှန်ဘီလူးကိုသုံးဖို့ ဖြုတ်ရ တပ်ရတဲ့ အခြေအနေမှာ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရုံလေးပါ။ အဲဒီ အထဲက အကောင်းဆုံးတစ်ခုကို ပြပါဆိုရင် landscape ရိုက်ကူးခြင်း နဲ့ မြင်ကွင်းကျယ်တွေအတွက် ကောင်းမွန်လှတဲ့ wide-angle lens ကို ကျွန်တော်တို့ ညွှန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
OlloClip အပြင် Moment lens တွေဟာလည်း သူရဲ့ lens တွေနဲ့ နာမည်ကြီးပါတယ်။ Kickstarter project က စတင်ခဲ့တဲ့ Moment မှာ လောလာဆယ် wide နဲ့ tele မှန်ဘီလူးနှစ်လုံး ရှိပါတယ်။ မှန်ဘီလူးကျယ်က အရာဝတ္ထု တွေအားလုံးကို ပုံထဲမှာ ပါစေချင်တဲ့အခါ၊ landscape တွေရိုက်ချင်တဲ့အခါ အသုံးဝင်သလို tele lens က subject တွေကို အနီးကပ် ဆွဲရိုက် ရာမှာ ဓါတ်ပုံရဲ့ အရည်အသွေးမကျပဲ ရိုက်ကူးနိုင်မှာပါ။ OlloClip က တစ်စုံကို စတာလင်ပေါင် 69 နဲ့ ရောင်းနေချိန်မှာ Moment က မှန်ဘီလူးတစ်ခုကို 99 ဒေါ်လာနဲ့ ရောင်းပါတယ်။ အဲဒါမို့လို့ သူတို့ဟာ iPhone photography ကို အမှန်အကန် စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ သူတွေအတွက် ပို သင့်တော်ပါတယ်။
နောက်တခုက သင့်ရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို သေချာသေချာချာနဲ့ တည်ငြိမ်တဲ့ပုံတွေဖြစ်စေချင်ရင် tripod ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသေးတယ်။ Joby GripTight ကို ကျွန်တော်တို့ ရွေးချယ်ချင်ပါတယ်၊ Amazon မှာ စတာလင်ပေါင် ၁၇ ပေါင်နဲ့ ရောင်းတဲ့ Joby Grip Tight ဟာ သင့်ရဲ့ ဖုန်းမှာ ခိုင်မြဲစွာ တပ်ဆင်ပြီး ဖုန်းကို တည်ငြိမ်စွာ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။
စာဖတ်သူရော ဘယ်လို App တွေကို ဘယ်ဖုန်းအမျိုးအစားမှာသုံးသလဲဆိုတာ အောက်မှာပြောခဲ့ပါ။
စာညွှန်း။ Max Parker ရဲ့ iPhone6Camera Tips and Tricks: How to take better pictures ဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန်ပါသည်။
ဓါတ်ပုံဝါသနာရှင်တွေအတွက် ဓါတ်ပုံပညာရှင်တွေရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်ကောင်းများ
May 30, 2016 Jedi 3